VLC waa ciyaaryahan caan ah oo warbaahinta qaar ka mid ah muuqaalada hodan in ay ku fiican sameeyo ciyaaryahan video . Sababtu waxa weeye in ay taageerto kala duwan ee files warbaahinta iyo qaabab. VLC ciyaari files warbaahinta laakiin sidoo kale siinayaa fursado hal abuur leh sida tafatirka. Iyadoo sixiddiisa aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in ay u badalaan qaabab file. Halkan waxa aad ku arki ka hage tallaabo-tallaabo ah oo diinta video files daaqadaha iyo Mac.
User Windows jecel yihiin in ay isticmaalaan VLC badan windows media player oo ay sidoo kale u isticmaali muuqaalada Converter ay ku haboon tahay in la abuuro qaab video files qalabka kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan aqoon sida loo sameeyo in daaqadaha halkan yihiin tallaabooyinka.
1. Open VLC Media Player. Hadda, u tag Media menu iyo maraan si loogu badalo / badbaadiyo.
2. Ka dib markii u gujinaya, waxaad yeelan doontaa new window "Open Media". Tag File tab, waxaa aad leedahay laba qaybta. In qaybta koowaad, ku dar faylasha aad rabto in aad si loogu badalo iyo labaad, waxaad ka mid noqon kartaa Cinwaan file in Cudarada in file video ah.
1. Click on the badalo / Save button ka dib laba qaybood. On suuqa kala socda, waxaad u baahan doontaa in ay doortaan folder Ahaado. File waxay ku siin kartaa magac aad jeceshahay. Marka ay dhamaato, dooro video profile la doonayo. VLC siinayaa xirmo default ah profiles, kuwaas oo si weyn sida audio ama loo isticmaalo video qaab s. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad edit karaa oo loo abuuro profiles cusub oo isticmaalaya foomka. Waxaa jira meel kale oo kala duwan in aad la cayaari karo. Si aad u soo afjarto kaliya guji bilaabatay.
Ayaa 2. Marka aad riixi bilow, waxaad u baahan doontaa in ay sugto hawlaha qaab beddelidda dhammayn. Ciyaaryahanka durdurro files ee xawaaraha laba jeer oo ka dhabayso. Marka la dhammeeyayna, waxaad ka arki kartaa file saarka natiijada la doonayo ee.
VLC waxaa preloaded la codecs muhiim ah, laakiin haddii bartey version software aad ka maqan codecs qaar ka mid ah aad ku rakiban kartaa pack codec. Isku day inaad hesho baakada K-lite codec. Just Google baadhaan waxaad ka heli doontaa link download.
Iyada oo ay taageerayaan qaab: 3gp, avi , flv, MOV, mkv , mp4 , mpeg1, MPEG2, DivX, H / waan 263, Mpeg 2 audio, mp3 , FLAC, pcm iyo sharciga A.
Waxa kale oo aad u bedeli karaan faylasha aad Mac. Waxaad u abuuri karaan faylasha taageera Lugood iyo aad gali kartaa on iCloud si hagaagsan files la aaladaha kale ee Apple ama si fudud u isticmaalaan sixiddiisa hal abuur videos. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu celiyaa videos on Mac:
1. Open VLC Media Player aad ku MAC. Tag menu File iyo dhaadhac Beddelaan / Stream. Sug sanduuqa wada hadal la furo. On suuqa kala cusub, dooro faylasha aad rabto in aad si loogu badalo adigoo gujinaya Open Media. In qaybta hoose, waxaad had iyo jeer ku dari kartaa subtitles files qaabo file video. Si aan u dhammeys tallaabadaas, u tag Beddelaan / Stream.
2. Hadda, doortaan qaab aad u baahan tahay si loogu badalo si. Waxaa jira goob kala duwan oo tweak in aad isticmaali karto si ay u abuuraan profile caado. Kaliya dooro qaabka aad rabto in aad si loogu badalo si. Marka aad hubto in ay goob oo dhan waa kaamil ah, guji Save sida File.
3. Marka nidaamka bilaabo inaad sameyso waa inaad sugtaa, maxaa dhammayn oo dhan. Waxaad ka arki kartaa horumarka. Hubi file wax soo saarka qaab beddelidda kadib lagu sameeyo.
Waxaad sameyn kartaa in ad ka badan codec by rakibidda codec K-lite u Mac. Si kastaba ha ahaatee, hadba nidaamka qalliinka aad isticmaasho, VLC yimaado iyadoo ku dhowaad dhammaan qaabab inuu kaa caawiyo inaad aragto videos iyo muusiko dhegayso.
Iyada oo ay taageerayaan qaab: 3gp, avi, flv, MOV, mkv, mp4, mpeg 1, MPEG2, DivX, H / waan 263, Mpeg 2 audio, mp3, FLAC, pcm iyo sharciga A.
VLC ma aha xalka kama dambaysta ah convertor laakiin waxa ay qabtaan shaqo wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay wax badan awood badan oo aad ku siineysaa kantarool badan ka dibna u isticmaali Wondershare Video Convertor Ultimate. Waxaad daawan kartaa, beddeli, kor loogu qaado, oo aanay videos ku jiraan-qeexidda sare ama 3D . Waxaad isticmaali kartaa Wondershare in la sameeyo beddelaad dheereysa oo sahlan. Ma aha in aad si dheer sugaan iyo waxaa laguu xaqiijin karaa in aad ku socoto si aad u hesho videos ku badaley aan qalad ah. Halkan waxaa ay dhamaystiran muuqaalada.
- Waxa badasha videos, kaas oo 30 jeer ka dhakhsi kaas oo ka dhakhso badan VLC ee xawaaraha diinta.
- Waxa ay taageertaa 159 qaab iyo hayaa ee la xariirta siiyo qalab in gebi ahaanba badalo kartaa file kasta oo si joogto ah. Xataa iyada oo qaabab culus sida 4K video format, tayada sawirka ayaa weli weyn.
- Waxaad ka your computer in TV smart fudayd durduri files warbaahinta via streamers caadiga ah sida Apple TV, chormecast. Isticmaal video Converter warbaahinta kama dambaysta ah server plugin in ay sii iyaga ku xiran iyada oo isla network.
- Waxaad taageero DLNA, taas oo macnaheedu yahay waxaad isticmaali kartaa Madaxweyne Siilaanyo, iyo qalabka kale ee DLNA shahaado ay ku maamulaan barnaamijyadooda iwm
- Waxaad hadda HEVC (Karti Sare Video codec) heerka riixo oo bixisa riixo laba jeer marka loo eego h.264 horreeyay ee ay laakiin ilaalinta tayada asalka ah.
> Resource > VLC > Sida loo sameeyo VLC dhigaan Video Converter ah?